ज्योतिष हरिहरलाई लिएर 'कबिर सिंह' को नेपाली रिमेक निर्माण गरिने ⋆ Filmy Pati
ज्योतिष हरिहरलाई लिएर…
ज्योतिष हरिहरलाई लिएर ‘कबिर सिंह’ को नेपाली रिमेक निर्माण गरिने
असार २४ – तेलेगु फिल्म अर्जुन रेड्डीको हिन्दी रिमेक बलिउडमा ‘कबिर सिंह’ ले हल्का मच्चाईरहेको छ । ब्यापार गरिरहेको छ । तेस्रो हप्तामा प्रदर्शन भईरहदा शाहिद कपुर अभ्नित ‘कनिर सिंह’ ले सलमान खानको ‘भारत’, विक्की कौसलको ‘उरी द सर्जिकल स्ट्राइक’ जस्ता फिल्मलाई पनि पछी छोडिसकेको छ । फिल्मले अहिले सम्म २३५ करोड भन्दा बढीको ब्यापार गरिसकेको छ ।
तेलेगु फिल्म ‘अर्जुन रेड्डी’ को हिन्दी रिमेक ‘कबिर सिंह’ ले शाहिद कपुरलाई ठुलो सफलता दिएको छ । थोरै मात्र फिल्म खेल्ने शाहिदको करियरको सबै भन्दा ठुलो हिट फिल्म हो ‘कबिर सिंह’ । यो फिल्मलाई नेपाली दर्शकहरुले पनि अत्याधिक रुचाएका छन् । तेस्रो हप्तामा चलिरहदा नेपालका हलहरुमा यो फिल्मले अझै पनि हाउसफुल ब्यापार गरिरहेको छ ।
नेपाली दर्शकले नै अत्याधिक रुचाएको ‘कबिर सिंह’ को नेपाली रिमेक पनि बन्यो भने कस्तो होला ? नेपाली दर्शकले नेपाली ‘कबिर सिंह’ लाई माया गर्लान त ? यो त पछीको कुरा हो । बलिउडका कबिर सिंहलाई अत्याधिक रुचाएका नेपाली दर्शकहरुले अब नेपाली कबिर सिंह पनि हेर्न पाउने भएका छन् । अहिले ‘कबिर सिंह’ को नेपाली रिमेक बन्ने चर्चा रहेको छ ।
नेपालमा बिदेशी फिल्मको हुबबु फोटोकपी गरेर धेरै फिल्महरु बनेका छन् । जसलाई निर्माताहरु रिमेक भन्दैनन् । हुबबु चोरी गरेर फिल्म बनाउन्छन् तर रिमेकको लागि कपी राइट्स किन्दैनन् । तर ‘कबिर सिंह’ को भने नेपाली रिमेक बन्ने चर्चा छ । नेपाली रिमेकको लागि एक कम्पनीले १० लाख भारुमा कपी राइट्स पनि किनिसकेको चर्चा छ ।चर्चामा आए अनुसार ज्योतिष हरिहर अधिकारी नेपाली कबिर सिंह बन्नेछन् । उनले फिल्मको लागि भनेर जिम समेत शुरु गरिसकेको बताईएको छ ।उनले अर्जुन रेड्डी र कबिर सिंह जस्तै देखिन त्यही अनुसारको तयारी थालएका छन् ।
‘शुभ लभ’ बाट चलचित्रमा हात हालेका हरिहरको डेब्यु भने शुभ भएन । तर अब उनी कबिर सिंहको नेपाली रिमेकबाट धमाकेदार कमब्याक गर्ने सोचमा रहेका छन् । यद्दपी यस बारे कुनै अधिकारिक जानकारी भने आएको छैन । तर फिल्म बन्ने लगभग पक्का रहेको खबर बाहिरिएको छ । फिल्मको केही दिनमा नै अधिकारिक निर्माण घोषणा हुने बताईएको छ ।
सार्क फिल्म फेस्टिभलमा स्वस्तिमा पाईन् वेष्ट पफर्मर जुरी अवार्ड